ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ကောင်းကင်တမန်ကိုကြောင်
အားဖြင့် Linda Anderson တို့
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 07 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
တစ်ဦးကလူ့ Can ဖွင့်လှစ်
ချစ်ခင်ရပါသော Can ဖွင့်လှစ်,
သင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်နာလမ်းမှသင်ချစ်သောသူမပြောနိုင်သလား, သင်အနည်းဆုံးကမျှော်လင့်တဲ့အခါသင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုခုန်, နှင့်ပင်သောအခါitísမ dinnertime purr? ဟုတ်ပါတယ်, youíveကြောင့်ငါတို့အကြိုက်ဆုံးကြောင်စားနပ်ရိက္ခာပေးသနားပြီးနောက်ကျွန်တော် ပို. ပင်သင်တို့ကိုချစ်သောသူ!
Mommas လှသောအဆင်းကျားအစင်းနှင့်အတူမီးခိုးရောင် tabby ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်သူမကိုတွေ့ရှိသောအခါ, သူမကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ o တလွဲအ​​သုံးချခဲ့သည်မိမိအဘို့ fend မှစွန့်ပစ်လမ်းပေါ်မှာသူမ၏ Kittens ရှိသည်. ငါ့မိဘများ Mommas နှင့် Persephone ယူသောအခါငါကောလိပ်ကျောင်းငါ၏ပဌမနှစ်တွင်ခဲ့သည်, ကလေးပဲကျန်သွေ cati တ. ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့ရှိနေခြင်းကျေးဇူးတင်ခဲ့ကြသည်. Thorndike, တဆယ်ငါးနှစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြောင်, မကြာသေးမီကသေဆုံးသွားခဲ့. သူ့ကိုဆုံးရှုံးရတာကြောင့်ငါတို့ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြီး, ကျွန်တော် catless အိမ်တွင်နေထိုင်သောကိုဆက်လက်လုပ်ချင်တဲ့didnít. ကျွန်တော် furry မေတ္တာကိုပဌနာပြုသောအရာကိုလိုအပ်နေ,
ငါ့နှစ်ခုအဟောင်းတွေအစ်မတွေထွက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးမှကိုယ့်အိမ်မှာနေထိုင်နေသည့်တစ်ခုတည်းသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုအထူးသဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောကံကြမ္မာမှ, Mommas နှင့်သူမ၏သမီးကြောင်စိတ်ပညာ၏လယ်ပြင်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူခဲ့သည်; သူတို့peopleísဂရုစိုက်ရန်ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုလိုအပ်ချက်တွေကိုသိ.
ကျွန်တော်တို့စုရုံးသကဲ့သို့ဖြစ်လျှင်အဖြစ် Mommas ငါ့မိဘများနှင့်အကြှနျုပျကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အားဖြင့်သူမ၏အမည်ကိုရရှိခဲ့သည်. များမကြာမီကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအိမ်ပြန်လာမယ့်ပြီးနောက်, Mommas ကျမတို့တက်ခဲ့ကြသည်အရာကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါပတ်လည်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါစတင်. ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုအျောဟစျအခါတိုင်း, Mommas ငါတို့ခြေမှာထိုင်နေလျက်နှင့်သူမ၏အချစ်နှင့်နှစ်သိမ့်ကွပ်ကဲနိုင်သည့်တိုင်အောင်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်း.
တူညီသောမြို့အတွင်းနေထိုင်နှစ်ကြာပြီးနောက်, ငါ့မိဘများ Mommas နှင့် Persephone နှင့်အတူ Pennsylvania ပြည်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့, ငါ့နှမများငါမက်ဆာချူးဆက်တွင်နောက်ကွယ်မှ နေ. နေစဉ်. အကြှနျုပျ၏အဘသည်လည်းငါ့ကိုအရာရာရည်ရွယ်, သူ့ကိုတယောက်တည်းသာသေဖို့အဘို့အစဉ်အမြဲငါလိုချင်ကြလိမ့်မည်ဟုပြီးခဲ့သည့်အရာကြီး. သို့သော်လည်းတညဉ့်, ငါ့အဆိုးဆုံးစိုးရိမ်မှုတွေစစ်မှန်တဲ့လာကြပြီပုံရသည်. ငါ့နှမများအချို့အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်းနှင့်အတူငါ့တံခါးမှာရောက်ရှိလာ: ငါတို့၏အမိအကြှနျုပျအဘဧည့်ခန်းပေါ်မှာတုံးကိုရှာအိမ်ပြန်လာsheídသောသူတို့အားပြောပြရန်ကိုခေါ်ခဲ့သည် ?နား; ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေစဉ်သူကွယ်လွန်သွားခဲ့. ငါ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှ, သော်လည်း, ငါ့နှမများအကြှနျုပျအဘသည်သူ၏အသက်တာ၏နောက်ဆုံးအချိန်လေးတွင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ဘူးသောကပြောပါတယ်. အလွန်ချစ်ခင်ရသောမိတ်ဆွေသူနှင့်အတူခဲ့: Mommas.
ငါ့အမိ​​သူမ၏အလုပ်အကိုင်အဘို့အခရီးထွက်သည့်အခါ Mommas ငါ့fatherísအဆက်မပြတ်အဖော်ခဲ့. သူမသည်နိစ္စထာဝရအိပ်စက်ခြင်းမှာသူ့ကိုတွေ့သောညဉ့်, သူမလည်း Mommas မိမိအနားထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့. ငါ့အမိ​​သူ့အပေါ်မှာအျောဟစျသကဲ့သို့, ဒီကြောင်ငါ့အဘချန်ထားမည်မဟုတ်. လူနာတင်ယာဉ်ရောက်သည့်အခါ, Mommas ကျောနဲ့ထွက် paced နှင့်သူမ၏ပြောင်းရွှေ့စေဆိုကြိုးပမ်းမှုမှာကော်ဇောသို့သူမ၏သောအကောင်ကိုတူး.
ငါ့fatherísသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်, Mommas ငါ့အမိ​​, နေ့နှင့်ညဉ့်ကိုထိန်းရ, ရှိသမျှတို့သည်အခက်ခဲဆမှတဆင့်. သူမသည်ထိုအိမ်ကိုလျော့နည်းအထီးကျန်ဆန်နေပုံပေါက် လုပ်.. သူမ၏သတိနှင့်အတူ, Mommas ကိုနာကျင်အမှတ်တရများလျော့ပါးကူ​​ညီခဲ့. ငါ့အမိ​​သို့မဟုတ်အကြှနျုပျအျောဟစျအခါတိုင်း, Mommas စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုင်လျက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရုံးတော်ကိုသို့မဟုတ်လက်ကိုထိဖို့ဖောရုတ်သိမ်း, ကျွန်တော်တို့ကိုသူမအနီးသို့ရောက်တောသိစေကျွန်တော်တို့၏မျက်နှာတို့မှမျက်ရည်ကိုလျက်.
ကျွန်တော်တို့ကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းငှါမသကဲ့သို့သူမသည်အလွန်ဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေ၏; သူမကကျွန်တော်စိတ်မနာစေကြရန်လိုအပ်ကြောင်းသိပုံရသည်. ကျနော်တို့ဟစ်ကြော်လျက်ရပ်တန့်ပြီးနောက်, Mommas အကျယ်ဆုံးစတင်, အများဆုံးပူနွေးလာမှု purr. ထိုအခါငါတို့ရင်ခွင်ထဲတဦးပေါ်ကိုတောင်တက်sheíd. ငါသည်ငါ၏အမိကိုငါ Mommas မရှိသူတွေကာလကိုဖြတ်သန်းရပြီလိုဘယ်လိုသိdonít.
ငါ့fatherísအသေခံပြီးနောက်တစ်နှစ်နီးပါး, Mommas hyperthyroidism နှင့်အတူမကျန်းမမာဖြစ်လာခဲ့သည်. စျေးကြီးတဲ့ကင်ဆာဆေးနှင့်ဆေးဝါးမပါဘဲ, သူမသေဆုံးကြစေခြင်းငှါ,. ငါတို့သည်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူး. ငါတို့သည်ယခုသူမ၏ဆုံးရှုံးcouldnít.
နောက်ဆုံးတော့, သူမကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့. သူမပေါင်ပြီးနောက်ပေါင်သွန်းလောင်းရန်စတင်အဖြစ်, ကျနော်တို့သေချာသူမရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တက်ထားရန်အပိုစားစေခြင်းငှါ Mommas နှင့်အတူအတောမသတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့. နောက်ဆုံးမှာ, သူမငယ်လေးတစ်ခုနစ်ခုပေါင်သူမ၏ပုံမှန်တကျိပ်နှစ်ပါးသောပေါင်ပုံမှလျော့ကျ. ကျနော်တို့ရေဒီယိုသတ္တိကြွကုသမှုများအတွက် vet မှသူမ၏ယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ, ဝန်ထမ်းများ Mommas ကဲ့သို့သောကြောင်ကိုမြင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုtheyídပြောသည်; သူသည်ဤအလေးချိန်မှာအခြားလူနာထက်ကျန်းမာရေးကောင်းခဲ့ပါတယ်. သူမ၏ကုသမှု၏နေ့ရက်တွင်, Mommas ရှိသမျှတို့သည်အ vet နည်းပညာရှင်သောလက္ခဏာ, purring နှင့်သူတို့သူမ၏ပုခက်လွှဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်.
ငါသည်အ Mommas ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှပြန် လာ. ပြောဆိုရန်ကျေးဇူးတင်တယ်. ကံမကောင်းစွာပဲ, ကျမတို့ဒီနှစ်ဆီးချိုနှင့် အသက်ကြီး. Persephone ပျောက်ဆုံး. ဤမျှလောက်များစွာသောသူမ၏ရှေ့တော်၌အရွေ့သွားကွယ်ပျောက်ကြောင့်လျောက်ပတ်အပေါ်စွဲကိုင် Mommas စောင့်ကြည့်ဖို့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. သူမသည်ယခုကျနော်တို့လမ်းမကနေယူနှစ်ခုကြီးများခွေးပါဝင်သောအိမ်ထောင်စု၏ဦးခေါင်းသည်. ငါတို့သည်လည်းယခု Dutchess ရှိသည်, စော်ကားတာနဲ့လျစ်လျူရှုခဲ့သူလူငယ်တစ်ဦးသစ်ကိုကြောင်. Dutchess Mommasísခြေလှမ်းတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုချောင်းမြောင်း, ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံကိုလေ့လာ, အဘယ်အရပ်သို့သွားရန်, ဘုရားသခင်နှင့်အဘယ်အစာကိုစား.
Mommas တွေအများကြီးအသက်ခဲ့သည်. သူမသည်ယခုအခါအများကြီးပိုမိုပါးလွှာသည်, နှင့်သူမ၏ဆံပင်၎င်း၏တောက်ပ၏အများဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်. သူမ၏သားမွေး grooming နေစဉ်သူမကနေရောင်ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနဲ့ထိုင်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်. ငါသိသော်လည်းသူနှင့်အတူငါ့အချိန်ကန့်သတ်သည်, ငါစဉ်းစားရန်မကြိုးစား. အဲဒီအစား, ငါသည်အ Mommas ငါ့အဘသွန်သင်ခဲ့ရာများကိုအာရုံစိုက်. ကျွန်မချွင်းချက်မရှိမေတ္တာအကြောင်းဒီကြောင်ကနေကိုပိုပြီးသင်ယူခဲ့ကြပြီ, ရိုသေခြင်း, အခြားမည်သူမဆိုထံမှထက်မိသားစုနှင့်တာဝန်ရှိ. အဘယ်သူမျှမစကားများလုံလောက်စွာဖော်ပြဖို့နိုင်သောမေတ္တာစိတ်ကဗျာနဲ့ဖြစ်ပါသည်.
တခြားအရာအားလုံးထက်အထက်, Mommas ငါတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးနည်းပညာရှင်ဖြစ်လာပါပြီအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ကျွန်မလေးလေးနက်နက် ယူ. ချစ်လှစွာသောကိုင်ထားတဲ့ကိလေသာတို့နှင့်အတူငါ့ကိုမှုတ်သွင်း. ငါသည်သူတို့၏ဒုက္ခဆင်းရဲကိုမပြောကြဘူးသောသူတို့အဘို့စောင့်ရှောက်ဖို့သင်ယူခြင်းပါ၏, တိတ်တဆိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလေ့ရှိပြီးအပြန်၌အကြှနျုပျတို့၏မေတ္တာသည်သာမေးမြန်းသူ.
အခြားသူများကိုရှိပါသလား, တိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်လူ့, သူတို့ရဲ့အခြမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်လိုအပ်ကြသူ?